हेल्लो वडाध्यक्ष ज्यू, एम्बुलेन्स पाईएन अस्पताल जानु पर्ने थियो ! | eAdarsha.com
हेल्लो वडाध्यक्ष ज्यू, एम्बुलेन्स पाईएन अस्पताल जानु पर्ने थियो !
वडाध्यक्ष गुरुङले आफ्नो नीजि कारलाई एम्वुलेन्स जसरीनै प्रयोग गर्दै, अहिलेसम्म १७ जना भन्दा बढी विरामीको उद्धार गरिसकेका छन् । वडामा कसैलाइै केही विमारले च्याप्दा र एम्बुलेन्स समेत नपाईने अवस्था आएपछि वडाध्यक्ष आफै कार लिएर विरामीलाई पोखराका विभिन्न अस्पतालमा पुर्याउने र घर छाड्दिने काम गर्छन । सुत्केरी हुन नसकेका देखी मृगौलाको डायलसिस् जस्ता जटिल विरामीलाई अस्पताल ल्याउने लैजाने गरेका गुरुङले जनताको पिडा बुझ्न पनि यस्ता विरामीलाई सहयोग गरेपछि सजिलो भएको बताए ।
जनतालाई यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सहयोग नगर्नेहो भने के को जनप्रतिनिधि हुँ भनेर हिड्ने त ? वडाध्यक्ष गुरुङ्ग भन्छन् —“आखिर तिनै जनताले भोट हालेर जिताएका हुन क्यारे ।” उसो त वडाध्यक्ष गुरुङ्ग महानगरबाट फिप्टी/फिप्टीका योजना सवैभन्दा धेरै कार्यान्वयन गर्ने वडाध्यक्ष पनि हुन ।
वडाले ५ सय ७६ जनालाई राहत बाँडेकाे थियो भने राइजिङ स्टारले २५ जना, स्थानीय बेदराज न्यौपानेले ३५, राधा माधव लेखनाथ समितिले १५ जनालाई राहत सहयोग गरेका थिए ।
(नवराज सापकाेटाकाे रिपाेर्ट)
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बजारमा हुने गरेको अनुगमनलाई व्यावहारिक गराउँदै अनुगमन…
कान्तिपुर डेन्टलको दसैं तिहार अफर
पोखरा । गण्डकी प्रदेशकै पहिलो डेन्टल हस्पिटल कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटलले दसैं तिहारको अवसरमा विशेष अफर घोषणा गरेको छ । ‘महान्…
उत्तमचोकमा द बारबार क्लब
पोखरा । पोखरा १० उत्तमचोकमा द बारबार क्लब सञ्चालनमा आएको छ । समयानुकूल हेयर कटिङ र डिजाइनका लागि पोखराको उत्तमचोकमा…